Amboary ny boaty fitadiavanao Firefox (amin'ny bilaoginao manokana!) | Martech Zone
Alakamisy 1 martsa 2007 Alahady Oktobra 4, 2015 Douglas Karr
Mety ho hitanao ny ahy fa izaho dia Firefoxaholic. Tiako ilay mpitety tranonkala ... maivana ary tsotra be ampiasaina. Ny iray amin'ireo fiasa hafa tiako dia ny lisitry ny fikarohana etsy ambony ankavanana. Azoko atao ny manana ny motera fikarohana tiako indrindra ao ary miverina miverina.
Raha te hampiditra motera fikarohana an'i Firefox dia mila mankany amin'ny Search Engine Hanampy pejy ary tsindrio ireo izay tianao hapetraka.
Saingy fantatrao ve fa afaka manangana iray ho an'ny tranonkalanao manokana ianao? Tena tsotra izany. Ny endrika fampidirana plugins an'ny Search Engine dia fitambaran'ny rakitra XML (.src) sy sary iray haseho. Androany alina, nahazo hevitra aho… ahoana no hataoko manampy ny tranokalako amin'io lisitr'ireo Search Engine io?
Tena mora izany. Ny adiresiko mikaroka ny tranokalako (azonao atao ny mitsapa an'io amin'ny boaty fikarohana) http://martech.zone’s=something izay "s" no miova ary ny zavatra iray no teny tadiavina.
Raha mampihatra azy ireo amin'ny endrika tsotra aho dia nanoratra kaody vitsivitsy hamoahana ilay rakitra src izay ampiasana motera fikarohana ao amin'ny tranonkalanao. Tsindrio eto raha hizaha ilay endrika ary ampio ny bilaoginao na ny tranokalanao (raha manana fahaiza-mikaroka izy), amin'ny bilaoginao manokana!
Raha tianao ny bilaogin'olon-kafa, toa John Chow… Azonao atao ny manampy ny motera anao John Chow Search s toy ny miovaova! URL: http://www.johnchow.com/’s=something. Like Problogger? Azonao ampiana toy izany koa ny iray!
Matt Cutts? URL: http://www.mattcutts.com/blog/ ary s ho an'ny variana.
Raha tsy namboarina, s dia miovaova foana ho an'ny bilaogy WordPress ka mety tena hanampy izany. Manantena aho fa tianao izany!
Ampio ny lisitry ny Search Engine List ny bilaoginao…
Mar 2, 2007 amin'ny 12: 04 AM
Miezaka manampy ny Google CSE amin'ny alàlan'ity fomba ity aho saingy manana olana… inona no tsy ampy amiko?
Ity dia zavatra tsara .. misaotra betsaka Douglas!
Mar 2, 2007 amin'ny 8: 24 AM
Tena hanandrana izany aho amin'ny manaraka. Firefox dia somary mateza kely amin'ny fanambarana lalana ho an'ny rakitra loharano. Tsy maintsy namitaka izany aho mba hahavitana izany. Avelao aho hijery izany ao anatin'ny iray andro eo ho eo dia ho hitako izay azontsika resahina. Heveriko fa karazana olana miaraka amin'ireo endri-tsoratra nolalovana.
Mar 2, 2007 amin'ny 10: 47 AM
Mahita tsara tokoa. Izaho dia miditra foana mba hahita lahatsoratra ampifandraisina, ity dia hitahiry fotoana kely.
Mar 2, 2007 ao amin'ny 12: PM PM
Tokony hiaiky aho fa nanompo tena izany. Mitady zavatra tsy hadinoko foana aho amin'ny tranokalako. 🙂
Mar 2, 2007 ao amin'ny 3: PM PM
Hitako fa matetika ny fikarohana ao amin'ny tranokala google (mampiasa ny tranokala: teny lakile) dia manome valiny tsara kokoa noho ny mampiasa ny fikarohana ao anaty WordPress.